Maimaimpoana ireo mpihaza harena amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Imbetsaka izahay no niresaka momba ny developer G5, iray amin'ireo vitsy izay mifantoka amin'ny ezaka famoronana ankehitriny Adventures sary ho an'ny iOS sy macOS, na dia ity aza amin'ny ambaratonga kely kokoa. Amin'izao fotoana izao ny G5 dia manolotra lalao fifaneraserana marobe ao amin'ny App Store, nandoa vola izy rehetra. Indraindray, ny orinasa dia manolotra vonjimaika ny sasany amin'ny lalao maimaim-poana mba hahafahan'ny mpampiasa mankafy azy ireo nefa tsy mila mandoa vola euro iray akory. Amin'ity indray mitoraka ity ny lalao voafantina dia Treasure Seekers: Vision of Gold, azo alaina amin'ny kinova ho an'ny iPhone sy ny HD ho an'ny iPad. ny kinova iPhone dia vidiana amin'ny 2,99 euro ary ny kinova iPad amin'ny 4,99 euro.
Amin'ity lalao ity dia mila miara-miasa amin'i Nelly sy ny zokiny lahy izahay mba hamaha ny tsiambaratelon'ny fianakaviana sy hiatrika zava-miafina manaitra. Nelly dia nanonofy foana ny hahita ny harena nafenin'ny renibeny, jiolahin-tsambo manafina harena tsy mampino Taona maro lasa izay. Rehefa navelan'ny ray aman-drenin'i Nelly niaraka tamin'i Tommy rahalahiny izy, dia nanjavona ity farany. Tsy maintsy hamaha ny fanjavonana hafahafa izay hitarika antsika amin'ny sarintany harena taloha isika. Tsy maintsy hizaha toetra ny fahaizantsika isika mba hahafahantsika mandresy ireo ankamantatra sy fitsapana samihafa hitantsika teny an-dalana.
Toetoetran'ireo mitady harena: fahitana volamena
Haavo maherin'ny 40 nozaraina tamin'ny toerana 7 samy hafa.
Sary mahafinaritra izay handentika antsika ao amin'ilay tantara amin'ny fomba tsy mampino.
Mandritra ny lalao dia mila mamaha piozila 19 sy lalao mini-be tsy voafaritra izay hametraka antsika amin'ny fitsapana amin'ny fotoana rehetra isika.
Mifanaraka amin'ny Game Center, hahafahantsika manaraka ny lalao amin'ny iPad na iPhone.
Hita amin'ny teny espaniola, anglisy, frantsay, italianina, alemà ary rosiana.
Mila ny iOS 6.0 na avo kokoa hiasa, ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad, ary iPod touch.
Ny fampiharana dia tsy misy intsony ao amin'ny App Store Ny fampiharana dia tsy misy intsony ao amin'ny App Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Mpihaza harena maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
Samsung dia hivarotra ny Galaxy Note 7 nohavaozina any amin'ny firenena sasany